Daawo: ” Ibrahim Mahdi waxa uu noo ahaa ruux aanu ku dayano oo reer facwayna ka soo jeeda. Xisbigii ayaanu kugu soo celinaynaa” Xisbiga wadani oo ka qaliyey siraha uu Ibrahim hayo ee uu balan qaaday in uy saxaafada la wadaagaayo. | ToggaHerer
← Waxaa Maanta Hoolka Dawlad Hoose Ee Hargeya Ka Dhacey Doorashada Hogaanka Cusub ee gudida Basaslayaasha Caasimadda Hargaysa (City Bus)
Daawo: Wasiirka Awqaafta Somaliland Oo Gabiahaanba Laalay mamnuucna ka dhgay bandhig faneed ay qabanaysay Kiin jaamac .. →
Daawo: ” Ibrahim Mahdi waxa uu noo ahaa ruux aanu ku dayano oo reer facwayna ka soo jeeda. Xisbigii ayaanu kugu soo celinaynaa” Xisbiga wadani oo ka qaliyey siraha uu Ibrahim hayo ee uu balan qaaday in uy saxaafada la wadaagaayo.
Published on October 7, 2021 by Oday
” Ibrahim Mahdi waxa uu noo ahaa ruux aanu ku dayano oo reer facwayna ka soo jeeda. Xisbigii ayaanu kugu soo celinaynaa” Xisbiga wadani oo ka qaliyey siraha uu Ibrahim hayo ee uu balan qaaday in uy saxaafada la wadaagaayo.